Maxamed: Dadkii doonta tahriibka ila saarnaa oo dhan kaligey ayaa ka badbaaday - BBC News Somali
Lahaanshaha sawirka TIMES OF MALTA
Image caption Maxamed wuxuu ka mid ahaa 15 tahriibeyaal ah, kaligiis ayaana ka badbaaday
"Waxaan doonta ku saarneyn 15 ruux, kaligey ayaana ka badbaaday", ayuu yiri Maxamed Aadan Oga oo ku sugnaa sariirta Isbitaal ku yaalla Malta.
Mid kasta oo ka mid ahaa Tahriibeyaashan wuxuu lacag dhan $700 oo doolar siiyay mukhalas reer Liibiya ah, si loogu diro safarka ay ku aadayeen Yurub, iyagoo sii maraya badda halista badan ee Mediterranean-ka.
Xilliga ay safrayeen wuxuu kuleyl aad u daran ka jiray bartamaha badda.
Ka dib waxaa ka go'ay shidaalka ay ku socotay doontii ay saarnaayeen. Xoogaa ka dib haddana waxaa ka dhammaaday raashinkii ay sahayda ugu talagaleen iyo biyihiiba.
Maxamed waa qofka kaliya ee ka badbaaday dadkii ay isla safrayeen, intii kale way wada dhinteen.
Waxaa ku jirtay haweeney uur leh oo u bareertay inay ku safarto mid ka mid ah biyaha ugu khatarta badan guud ahaan caalamka.
"Waxaan badda ku jirnay 11 maalmood. Markii ay wax walba naga dhammaadeen waxaan billownay inaan cabno biyaha dhanaan ee badda. 5 maalmood ka dib 2 ruux ayaa naga dhimatay. Ka dibna maalin walba waxaa dhimaneysay 2 ruux", ayuu yiri Maxamed.
Tahriibeyaal Soomaaliyeed oo taladu ku ciirsan tahay
Tahriibeyaal la badbaadinayo iyadoo 20 ka mid ah ay dhinteen
Image caption Howlihii badbaadinta Tahriibeyaasha ayaa yaraaday
Ninkan waxaa lasoo badbaadiyay maalintii Isniinta, ka dib markii ay ciidamada ilaalada xeebaha ee Yurub arkeen isagoo saaran doon yar.
Muuqaal laga soo duubay howlgalkii lagu badbaadiyay ayaa lagu arkayay isagoo uu ag yaallay meydka nin kale, kahor inta aan diyaarad loogu qaadin isbitaalka.
"Alle ayaa ii soo diray Ciidanka Malta si ay ii badbaadiyaan", ayuu yiri mar uu la hadlayay wargeyska Times of Malta, xilligaasoo ay ka muuqatay tabardarro, socodkuna uu dhibayay.
Sida uu safarkan ku galay
Ninkan 38 jirka ah, oo sheegay inuu yahay siyaasi reer Itoobiya ah oo kasoo cararay waddankiisa, kana mid ahaa fallaagadii hore ee xoreynta Oromada, ayaa go'aan ku gaaray inuu safar ku tago Yurub ka dib markii ay lasoo xiriireen saaxiibbadiis oo ku sugan dalka Jarmalka.
Image caption Maxamed Hadda wuxuu jecelyahay inuu tago UK
Markii uu tagay Liibiya, wuxuu la kulmay nin Soomaali ah oo lagu magacaabo Ismaaciil, waxayna isla qorsheeyeen safarkooda, iyagoo la heshiiyay mukhalas.
1-dii bishan Agoosto ayey ka tageen magaalada Zawia ee dalka Liibiya, taasoo qiyaastii 45km dhinaca galbeed ka xigta magaalada caasimadda ah ee Tripoli.
"Mukhalaskii ayaa na siiyay qalabka jihooyinka sheega ee loo yaqaanno GPS-ka wuxuuna nagu amray inaan u safarno Malta", ayuu yiri Maxamed.
Dadkii doonta la raacay waxay ka ahaayeen nin iyo haweeney uur leh oo u dhashay Ghana, 2 ruux oo reer Itoobiya ah iyo 11 Soomaali ah, sida uu sheegay.
Markii ay ka go'een shidaalkii, cuntadii iyo biyihiiba, waxay galeen xaalad cabsi badan, waxayna isku dayayeen inay caawinaad weydiistaan doomaha badda marayay iyo diyaarado kuwa qumaatiga u kaca ah oo dushooda gudbayay.
"Waxaan aragnay doomo badan. Waan u qeylinay, 'Na caawiya, Na caawiya!' gacmaha ayaan u taageynay iyaguna way iska gudbayeen. Diyaarad helicopter ah ayaa noo timid wayna iska baxday".
Image caption Tahriibeyaal badan ayaa ku dhinta badda Mediterranean-ka
Maxamed wuxuu goob joog u ahaa dadkii la safrayay oo wada dhimanaya.
"Waxay dhinteen iyagoo doonta saaran. Qorrax kulul ayaa jirtay. Cunto ma aannaan heysanin biyana warkoodaba daa. Ismaaciil wuxuu ii sheegay inaan meydadka ku ridno badda sababtoo ah way urayeen".
Ugu dambeyntii, waxaa doontii ku soo haray labadooda oo kaliya. Markii dambena Ismaaciil ayaa geeriyooday.
Ka hor inta uusan dhimanin wuxuu aad uga murugooday dadkii la socday oo wada dhintay, taas ayaana u sababtay xanuun dheeraad ah.
Maxamed wuxuu ka mid yahay in ka badan 40,000 oo tahriibeyaal ah oo la badbaadiyay sanadkan gudihiisa.
Sida laga soo xigtay Qaramada Midoobay, sanadkan oo kaliya 839 tahriibeyaal ah ayaa ku dhintay badda Mediterranean-ka, iyagoo danacsanaa inay u gudbaan qaaradda Yurub.